တလောက သတင်းတွေမှာ မြန်မာပြည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနအသစ်တခုအောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ တကယ်သာဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ယူစရာပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံက အဖက်ဖက်မှာ သူများနောက်ရောက်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ သူများတကာတီထွင် ဖော်ထုတ် ထုတ်လုပ်ထားတာတွေကိုဘဲ နောက်ကလိုက်သုံးနေခဲ့ရတာ၊ ကောင်းမကောင်းမသိ၊ ဆိုးကျိုးရှိမရှိမသိနဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကပါဘဲ။ ကျန်းမာရေးဆိုလည်းကျန်းမာရေးအရ၊ စိုက်ပျိုးရေး-မွေးမြူရေး၊ အိုင်တီ စသည်ဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှာ နယ်ပယ်တိုင်းမှာ မြန်မာကတီထွင်တွေ့ရှိပြီး နိုင်ငံတကာက လိုက်အသုံးချရတယ်ဆိုတာ မကြားဖူးပါဘူး။ ပညာရှင်တွေဖြစ်လာဖို့ ခေတ်အဆက်ဆက်နိုင်ငံတချို့ကိုပညာသင်စေလွှတ်ပြီး ဘွဲ့တွေယူ ပညာတွေသင်လာစေခဲ့ပေမယ့် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ တကယ်တမ်း ပြန်အသုံးချဖို့အပိုင်းကျတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပါ။
ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်က တက္ကသိုလ်တွေမှာ သုတေသနအတွက် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခုကမ္ဘာမှာ သုံးစွဲနေတဲ့ ပစ္စည်း-ဆေးဝါး-ကုသမှု-နည်းပညာ အများစုဟာ တက္ကသိုလ်နဲ့သုတေသနစင်တာတွေကနေ စတင်စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ပြီးမှ နောက်ဆုံး လူတွေသုံးနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ကို ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကနေ ပညာရေးနဲ့သုတေသနကိုများများထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေက တွေ့ရှိတီထွင်မှု များများလုပ်နိုင်ပြီး ပိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ရှေ့တန်းရောက်နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ နည်းပညာတွေလေ့လာတတ်မြောက်နေကြတဲ့ ပညာရှင်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုတေသနလုပ်ဖို့ အခြေခံအဆောက်အဦး-ပစ္စည်းနဲ့ငွေအားမရှိကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဝမ်းစာဖူလုံအောင် အာမခံချက်ရှိတဲ့ လစာထောက်ပံ့ငွေမရကြတဲ့အတွက် ကိုယ့်ပညာနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အစား၊ ၀မ်းစာအတွက်ဘဲ ကျရာအလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရပါမယ်။ ဒါ့အပြင်သူများတွေ့တာတွေကိုဘဲ နှုတ်တိုက်စာကျက်ပြီး စာမေးပွဲအောင်တဲ့စနစ်ကနေ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့-သုတေသနအားပေးတဲ့စနစ်ကို ပြောင်းသင့်ပါပြီ။ ဘွဲ့ကြို (undergraduate) အဆင့်ကတည်းက သုတေသနလုပ်တတ်အောင် သင်ကြားပြုစုပျိုးထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ဘွဲ့ကြိုတွေဟာ ဘွဲ့တခုမရခင်အနည်းဆုံးသုတေသနတခုကို ဆရာတွေနဲ့တွဲလုပ်ကြရပါတယ်။ ဒီနှစ်ကနေဒါတိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Research Day သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲက ဘွဲ့ကြိုတွေရဲ့စာတမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာပြည်က မာစတာ-ပီအိတ်ချဒီစာတမ်းတွေထက် အဆင့်အများကြီးမြင့်တာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း တိုင်းရင်းဆေးစတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ ကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ ဘာရောဂါတော့ပျောက်တယ် သက်သာတယ် စသည်ဖြင့် သုတေသနတွေရှိပေမယ့် ပညာရေးစနစ်က ပြည်တွင်းမှာဘဲ စာတမ်းလေးတစောင်ထုတ်ပြီးဘွဲ့ပေးတဲ့စနစ်မို့ မြန်မာ့သုတေသန ကမ္ဘာက မသိပါဘူး။ လက်တွေ့အသုံးချနယ်ပယ်ကို ရောက်မလာပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မာစတာလုပ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတယောက်က မာလကာရွက်ကထုတ်တဲ့ဓာတ်ကနေ သွားဖုံးရောင်ကျစေတဲ့အကြောင်းသုတေသနလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရလာဒ်ကောင်းတွေတွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သုတေသနရလာဒ်တွေဟာ မာစတာသီးစစ်စာအုပ်အနေနဲ့ တက္ကသိုလ်က ရှေးခေတ်တုန်းကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေသာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ရဲ့ဘီရိုတခုထဲမှာ ဖုန်တက်သွားတာပါဘဲ။ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ ခုလောက်ဆို မာလကာရွက်ခံတွင်းငုံဆေးဆိုပြီး စီးပွားဖြစ်ထုတ်နေ သုံးနေကြရောပေါ့။
ဒီတော့ မြန်မာပြည်က မာစတာ-ပီအိတ်ခ်ျဒီစတဲ့ ဘွဲ့လွန်သုတေသနတွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဂျာနယ်တွေမှာ တင်စေတာ၊ နိုင်ငံတကာညီလာခံတွေမှာ စာတမ်းသွားဖတ်ခွင့်ပြုတာမျိုး ဖွင့်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှကမ္ဘာမှာ မြန်မာကလုပ်တာ..ဆိုတာ လူတွေသိပါမယ်။ အဲဒီလို နိုင်ငံတကာဂျာနယ်တွေမှာတင်နိုင်အောင်လည်း အဆင့်မီတဲ့သုတေသနတွေလုပ်နိုင်အောင် ပစ္စည်းအား-ငွေအား-နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ် စတာတွေပံ့ပိုးပေး၊ ခွင့်ပြုပေးရမှာပါ။ ဂျပန်မှာတော့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ အပြိုင်အဆိုင်သုတေသနတွေလုပ်ချင်လာအောင် Grant ချပေးတဲ့စနစ်တွေလုပ်ပါတယ်။ နှစ်တိုင်း အစိုးရပိုင် National University တွေက အဆင့်မြင့်သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေ ရွေးချယ်ဖော်ပြပြီး၊ အဲဒီလိုသုတေသနတွေထွက်တဲ့တက္ကသိုလ်တွေကို ငွေအားထပ်မံပံ့ပိုးပေးတာမျိုး လုပ်ပေးပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်ရဲ့ report ကို အောက်ပုံတွေမှာပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ရဲ့အထူးတွေ့ရှိချက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနရလာဒ်တွေအကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အပေါ်ပုံက တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာ ဆရာတဦးနဲ့အတူ dental implant ကုသမှုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံနဲ့ ဒီကုသမှုအတွက်အရေးပါတဲ့ အရိုးသားပြန်လည်တည်ဆောက်မှုသုတေသနတွေ့ရှိချက်အကြောင်းပါ။ အောက်ပုံက Tokyo Institute of Technology ကတီထွင်တွေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အမာဆုံးစိန် သုတေသနဖြစ်ပါတယ်။
Nara Institute of Science and Technology ရဲ့ပန်းပွင့်စေတဲ့ဟော်မုန်းသုတေသန
အမေရိကန်က ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာသုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေအကြောင်းဖော်ပြနေတဲ့ NewsRx Magzine မှာသတင်းဖော်ပြချက်
နောင်တချိန်မှာတော့ Tokyo, Japan ကိုယ်စားပြုမြန်မာကျောင်းသားအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ University of Dental Medicine, Yangon, Myanmar အနေနဲ့သုတေသနအသစ်အသစ်တွေလုပ်ရင်း ကမ္ဘာမှာမြန်မာက... ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်ချင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး အစစအရာအရာအမြန်တိုးတက်ပြောင်းလဲပါစေ။
References: 1. Annual report No.15, The Japan Association of National Universities
2. New findings in tissue engineering described by M. Nyan and co-researchers, Drug Week (2009-03-27), NewsRx
Posted by Dr. Nyan at 7:44 AM
Yes, Dr. Nyan. I feel the same way.
U Nyan သုံးသပ်တင်ပြထားတာများကို လက်ခံပါတယ်ဗျာ။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါရေးသားချက်ကလည်း မှတ်သားစရာပါ။
"...ဒီနှစ်ကနေဒါတိုရန်တိုတက္ကသိုလ်ရဲ့ Research Day သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲက ဘွဲ့ကြိုတွေရဲ့စာတမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာပြည်က မာစတာ-ပီအိတ်ချဒီစာတမ်းတွေထက် အဆင့်အများကြီးမြင့်တာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်..."
(ဒါကြောင့် လောလောဆယ် ဂျပန်မှာ မဟာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့ ယူကြမယ့် မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း ဘွဲ့ရသွားဖို့ တစ်ခုနဲ့တင် မတင်းတိမ်ဘဲ မိမိရဲ့ ပညာရေး အခြေအနေ၊ အဆင့်အတန်းကို မြန်မာအချင်းချင်း သာမက၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြိုးစားနိုင်စေဖို့ ဒီပိုစ့်လေးက အားတစ်ခု ဖြစ်စေဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။)
Dr.Nyan, I totally agree with you.
Wish you all the best in your research asarepresentative of Myanmar researcher.
လေးစားစွာ ဖတ်သွားပါတယ် ဆရာရေ။ သုတေသနတွေ ဒီ့ထက်ပိုပြီးပြုနိုင်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်နယ်ပယ်မှာ ဒီ့ထက်အများကြီး ကြိုးစားရဦးမယ်။